.အမေဖြစ်သူက ဖုန်းဖွက်ထားရတဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ သနားစရာ အဖြစ်ကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ယုန်လေး. – Askstyle
.အမေဖြစ်သူက ဖုန်းဖွက်ထားရတဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ သနားစရာ အဖြစ်ကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ယုန်လေး.
မဂၤလာပါ ပရိသတ္ႀကီးေရ အဆိုေတာ္၊ ဒါရိုက္တာ၊ သရုပ္ေဆာင္ ယုန္ေလး ကေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးအရြယ္ကတည္းကေန ဒီေန့ဒီအခ်ိန္ထိ အနုပညာအလုပ္ေတြကို တစိုက္မတ္မတ္နဲ့ စြဲလန္းစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုန္ေလးက အနုပညာအလုပ္ေတြကိုခ်စ္သလို အနုပညာ ရွင္ေတြအေပၚမွာလည္း သံေယာဇဥ္ၾကီးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး သူ့ရဲ့မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္လို ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန့မွာေတာ့ ယုန္ေလးက သူ့ရဲ့ ညီတစ္ေယာက္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ျခိမ့္ေကကိုရဲ့ အေၾကာင္းကို အခုလိုပဲ ေျပာျပလာပါတယ္။
ယုန္ေလးက “IDOL ေလး နဲ႔ စေတြ႕တုန္းက ကိုဒိန္းေဒါင္ ဖုန္းဆက္တယ္။ ဆရာခ်ိန္႔ ရဲ႕ အေမက ဖုန္းသိမ္းထားတယ္။ လံုးဝ ေပးမသံုးဘူးတဲ့ အေမရယ္ သားကို (၁၅) မိနစ္ေလာက္ေလးပဲေပးသံုးပါတဲ့။ မေပးႏိုင္ဘူးတဲ့ . ဖုန္းဖြတ္ထားရတယ္တဲ့။ အဲ့လိုက်ေတာ့လဲ သနားပ ါတယ္ ” ဆိုျပီး အေမကပါ ဖုန္းဖြက္ထားရတဲ့အထိျဖစ္ေနတဲ့ ျခိမ့္ေကကိုရဲ့ ရယ္ဖို့လည္းေကာင္း၊ သနားဖို့လည္းေကာင္းတဲ့ အျဖစ္ကို ေျပာျပလာပါတယ္။
ျခိမ့္ေကကိုကေတာ့ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ Live လႊင့္ျပီး တလြဲေတြလုပ္တတ္လြန္းလို့ သူ့ရဲ့ဆရာျဖစ္သူ ဒိန္းေဒါင္က သူ့ရဲ့မိခင္ကို ဖုန္းသိမ္းခိုင္းထားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုန္ေလးေျပာသလိုပဲ ဒီလိုက်ေတာ့လည္း ျခိမ့္ေကကိုရဲ့အျဖစ္က တကယ့္ကို သနားစရာပါပဲ။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ခ်စ္ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္ေနာ္…။
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင် ယုန်လေး ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးအရွယ်ကတည်းကနေ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ အနုပညာအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ စွဲလန်းစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးက အနုပညာအလုပ်တွေကိုချစ်သလို အနုပညာ ရှင်တွေအပေါ်မှာလည်း သံယောဇဉ်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို ချစ်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ယုန်လေးက သူ့ရဲ့ ညီတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
ယုန်လေးက “IDOL လေး နဲ့ စတွေ့တုန်းက ကိုဒိန်းဒေါင် ဖုန်းဆက်တယ်။ ဆရာချိန့် ရဲ့ အမေက ဖုန်းသိမ်းထားတယ်။ လုံးဝ ပေးမသုံးဘူးတဲ့ အမေရယ် သားကို (၁၅) မိနစ်လောက်လေးပဲပေးသုံးပါတဲ့။ မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ . ဖုန်းဖွတ်ထားရတယ်တဲ့။ အဲ့လိုကျတော့လဲ သနားပ ါတယ် ” ဆိုပြီး အမေကပါ ဖုန်းဖွက်ထားရတဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုရဲ့ ရယ်ဖို့လည်းကောင်း၊ သနားဖို့လည်းကောင်းတဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြလာပါတယ်။
ခြိမ့်ကေကိုကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ Live လွှင့်ပြီး တလွဲတွေလုပ်တတ်လွန်းလို့ သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူ ဒိန်းဒေါင်က သူ့ရဲ့မိခင်ကို ဖုန်းသိမ်းခိုင်းထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးပြောသလိုပဲ ဒီလိုကျတော့လည်း ခြိမ့်ကေကိုရဲ့အဖြစ်က တကယ့်ကို သနားစရာပါပဲ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ချစ် ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်…။